အရိပ် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးခါး ● ရေထဲကငါး ကုန်းပေါ်တက်လာတော့
“အကို .. ငါပြန်လာနေမယ် စိတ်ကူးတာဘဲ
ညာလုပ်မယ် … ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေနဲ့…စသည်ဖြင့်ပေါ့”…..
အကုိုနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာကြာပြီမုို့ တော်တော်ကြာကြာ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ
အကုို့နားမှာထုိုင်နေတဲ့ အမေ အားလုံးကြားချင်ကြားမှာ
ဒါမှမဟုတ် တချို့တ၀က်တော့ ကြားချင်ကြားမှာပေါ့
အမေ့နှလုံးသားထဲဝင်သွားတာတော့ သားပြန်လာနေမယ်ဆုိုတဲ့ စကားလုံးပါပဲ
“သားပြန်လာနေမယ်ဆုို အမေသားနဲ့ နေမယ်နော” တဲ့ အမေက …
ကြည့်ပါဦး … သားသမီးကုို ဘယ်လောက်များ ငတ်မွတ်လုိုက်တဲ့ အမေရဲ့အသံလဲ….
မိဘတွေကကတော့ … ကုိုယ့်သွေးကနေဖြစ်တည် ရင်နှင့်လွယ် အသက်နဲ့ရင်းပြီးမွေး
ပုိုးမွှားလေးတကောင်းတတောင် အကုိုက်မခံရက်ပဲ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့
ကြည့်လာခဲတဲ့သားမသီးတွေ ဘယ်အရွယ်ကုိုပဲ ရောက်ရောက်
မေတ္တာတွေနဲ့ အုပ်မုိုးလုို့သာ ကာကွယ်ထားလုိုက်ချင်တယ်
ကလေးလေးတွေပါပဲ ..တကယ့်ကလေးတွေပါပဲ …
သားသမီးတွေ… အသန်မာဆုံးသော အတောင်ပံကိုခတ်ရင်း လေစုန် လေဆန်ပျံသန်းနေပါ
ဘဝရဲ့ပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေ… ဘယ်အရာမဆို ရင်ကော့ ခေါင်းမော့လို့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါစေ
၁၀ နှစ် နှစ်၂၀ ၂၅ နှစ် …
မိဘနဲ့ သားသမီး ကွဲကွာနေရမှုတွေ ခွဲခွာနေရတာတွေ
မိဘတွေရင်ထဲ မြတ်နုိုးမှုတွေ စွန့်ပစ်လိုက်ရသလိုပါဘဲ … သားသမီးကို မျှော်လင့်လို့နေကြတယ်
သားသမီးတွေကလည်း အတောင်ညောင်းပြီး ခိုနားရာမဲ့လာသလို….
မိဘရဲ့ အေးရိပ်ကို တောင့်တနေရပြီ
ရွှေပြည်တော် … မျှော် …
One Response to အရိပ်
ko lwin on February 25, 2013 at 3:35 am